စာအုပ်အညွှန်းနှင့် စာရေးသူအား မေးမြန်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » စာအုပ်အညွှန်းနှင့် စာရေးသူအား မေးမြန်းခြင်း	65
စာအုပ်အညွှန်းနှင့် စာရေးသူအား မေးမြန်းခြင်း
Posted by Thint Aye Yeik on Apr 4, 2015 in Creative Writing, Critic, Editor's Choice, History, Literature/Books, My Dear Diary, Myanmar Gazette | 65 comments
ဝင့်ပြုံးမြင့်၏ နှစ်ဘဝ နှစ်ကန္တာ – စာအုပ်အညွှန်း
( အပေါ်မှာ ရေးခဲ့သော စာအုပ်အညွှန်းနှင့် စာအုပ်မျက်နှာဖုံး ပုံသည် မြန်မာ့ ဂဇက် သတင်းစာထဲတွင် စာအုပ်အညွှန်းအဖြစ် ထည့်ရန်အတွက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ )
ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့်သို့ … မေးမြန်း/စူးစမ်းခြင်း ဘာသာပြန်သူ မဝင့်ပြုံးမြင့်ခင်ဗျားးးးးးး
တစ်ပိုင်းတစ်စပုံရိပ်များက ဇော်ထိုးမိုးမျှော် ထင်ဟပ်နေပြီ။ မြရေညိုတို့၏ မျက်နှာပြင်ကား ပကတိမှန်ကြေးမုံသဖွယ် ။ သကြားပင်ကြီး၏ က္ကန္ဒနီလာ ညောင်းရွက်ညာများ ဝေဟင်ထဲ ချာလည်ချာလည်ဝဲပြီးမှ မြေပြင်သို့ ခရရှာသည်။ ရေလွှာပေါ်မှ ရော်ရီရွက်ကြွေများကား ပေါလောပေါလောနှင့် ရှပ်တိုက်ပြေးကာ ကမ်းခြေမှ ရေပူဖောင်းများကို ကြက်သွေးရောင် လိမ်းကျံပေးလိုက်သလို ရေပူဖောင်းများ နီမောင်းသွားသည်။ ဖိုးလမင်းကြီး ထိန်ထိန်သာသော တိတ်ဆိတ်ညမျိုးတွင်…….
“နွေဦးဆန်းမှသည် နွေပီပီ ကူသန်းခဲ့ပြီ။ ခိုင်ညှာပုရစ်ဖူးတို့ တစ်သွင်ထူးကာ ချပ်လွှာစိမ်းရင့်များအဖြစ် ပင်ယံထက် မြန်းတင့်လျက်ရှိပြီ။ မာကျစ်ရွှံ့ခဲတို့ မွလွယ်သော သည်ချိန်ခါသည် လက်စသိမ်းပျိုးချချိန်ဖြစ်၍ နယ်တစ်ခွင်လုံး ပျားပန်းခတ်မျှ အလုပ်များကြရပြီ။ ပျိုးချ၍ပင် မပြီးသေး ။ ဒန်းထင်းရှုးပေါရာ အဝေးတောအုပ်ဆီမှ ပျံသန်းလာသော ယင်မည်းလေးများ တလှောင်းလှောင်း ရောက်လာကြပြီး သိပ်မကြာခင် တောလဒ်မြေ၏ အနောက်ဘက် ကုန်းရိုးခင်တန်းပေါ်ရှိ သကြားပင်အုပ်ဆီ ပျံ့နှံ့သွားကြပြန်သည်။ .မေလ နှစ်ဆယ့်လေးရက် ၊ ဘုရင်မမွေးနေ့တွင် နွေလယ်ကြီးကဲ့သို့ အပူငွေ့များက တခြောင်းခြောင်း ။
ရောင်လျှံရိပ်တို့ မြေ့မြေ့လျှံနေပုံက ရက်ကန်းရှယ်ပင့်ကူမျှင်များအလား ။ မနက်ပိုင်းဆိုလျှင် ပူငွေ့တို့ တိမ်အဖြစ်ဝန်းဖွဲ့ဆဲသာရှိပြီး မွန်းလွဲပြီဆိုပါမှ မြစ်ပြင်အထက်သည် တိမ်တောင်တိမ်ရောင်တို့ဖြင့် ခံ့ညားထည်ဝါ၍နေသည်။
…..ရှေးယခင်ကဆိုလျှင် သူသည် သူ့ဘာသာသူ လွယ်လွယ်ကူကူ ပျော်ရွှင်နိုင်ခဲ့သည်။ အစားအသောက်များကို ခုံတမင် ရှိခဲ့သည်။ ညစ်ကျယ်ကျယ်နှင့် မွန်ရည် ယဉ်ကျေးစွာ မူးအောင်သောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ….
ခင်ဇော် says: ဂွတ်ထ။
အပိုင်းခွဲ ညွှန်းတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။
Alinn Z says: ဟုတ်… ။ သတင်းစာထဲ ထည့် ဖို့ ညွှန်းတာက တစ်ပိုင်း…
အစ်မပြုံးဆီက စပ်စပ်စုစု သိချင်မိတာတွေ မေးမြန်းတာက တစ်ပိုင်း… အစ်မပြုံး…မအားတဲ့ကြားက အလုပ်များအောင်…မေးခွန်းတွေ ထုတ်မိပြီ…
ဆိုတော့… အားနာတာ နောက်ထားပြီး..သိချင်တာတွေ မေးပစ်လိုက်တယ်…အေးရော…
လာဖတ်သွားတဲ့ မမဂျီးကိုလည်း ဇူးဇူးပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဘုရား ဘုရား မေးခွန်းတွေက လွယ်တော့မလိုလိုနဲ့ ကြောက်စရာကြီးပါလား။ မေးခွန်းတွေ အသာထား။ အလက်ဇင်းညွှန်းလိုက်မှ ၀တ္ထု က နဂိုကထက်တောင် ပိုကောင်းသွားသေးတယ်။
.စာအုပ်ဖတ်ထားတဲ့ သူတွေ ရှိရင်လည်း မေးချင်ရာမေးကြပါနော်။ ခပ်ဖြည်းဖြည်း စဉ်းစားပြီး ဖြီးသွားပါ့မယ်။ မဖြေတတ်ရင်လည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်သွားပါ့မယ်။
naywoon ni says: ငင်​ ငါက သီးသန့်​ အားသွင်းဖို့ မလိုတဲ့ ဘက္ထရီ လို့ ​ပြောမလို့ !
နံပါတ်​သုံး ​မေခွန်းက ” ​ရှေးအတီ​တေ ” ဆိုတာ မသိဘူးလား ။ ကိုင်​ဇာ​တောင်​ သီချင်းလုပ်​ဆိုထား​သေးတယ်​​လေ ။
၀မ်းအပွန်း​အေတိုင်း ၀မ်းအပွန်း​အေတိုင်း ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးလား ။ ဓာ​သေ​ဒွေ တင်​တာ ကန့်​လန့်​​တွေဖြစ်​​နေလို့ ဒရပ်​လုပ်​ပီး ရပ်​ထားဒယ်​ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12185
Alinn Z says: အခုမှ တွေ့တယ်.. .အဲဒီပိုစ် သိမ်းထားတာ…
ကျနော်က အရင်တင်လိုက်လို့ နောက်ဆုတ်လိုက်ရသလို ဖြစ်သွားရင် ဆောရီးနော..
ကျနော် ခရီး မသွားခင်(အင်တာနက်လိုင်းမရတဲ့နေရာမို့ နက်လိုင်းရတုန်း အားတုန်းလေး) အလောတကြီးနဲ့ ဒီပိုစ့်ကို
တင်လိုက်မိတာ… ပုံတွေကို အဲဒီနေရာမှာပဲ…. ပြန်တည့်လို့ရတယ်လေ.. ဦးနီ…
မလွယ်ရင်… မော်မော်တယောက်ယောက်ကို အော်ပြောလိုက်…
.အော်ပြောလို့မှ လုပ်မပေးရင်… လမ်းတွေ့ရင်..အဲ့မော်မော်တွေကို ဂဲနဲ့ထု.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၁) မြန်မာဘာသာကနေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ပြန်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာကိုပြန်တာ ..ဘယ်ဟာ ပို ခက်ခဲပါသလဲ…
အဖြေ။ ။ ဒီလိုရှိတယ်လေ အလက်ဇင်း။ ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေ ၂မျိုး ထွက်မယ်။ တိုင်းခြားဘာသာစကားကနေ ဘာသာပြန်သူရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားကို ပြန်တာက ပိုလွယ်ပါတယ်။ ဥပမာ အစ်မရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားက မြန်မာ။ တိုင်းခြားက အင်္ဂလိပ်။ အဲဒီတော့ အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာကို ပြန်တာ ပိုလွယ်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးက ဘာသာပြန်သူရဲ့ အနေအထားကို ထည့်မတွက်ဘူး၊ ဘာသာစကားရဲ့ သဘောသဘာဝ ကိုပဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာကို ပြန်တာ ပိုခက်ပါတယ်။ အကျယ်ကနေ အကျဉ်းထဲကို သွင်းရလို့ ပိုခက်တာပါ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၂) အခုဝတ္ထု နှစ်ဘဝ နှစ်ကန္တာဟာ မြန်မာမှုပြုထားတာလား ၊ အတိအကျ ဘာသာပြန်ချထားတာလား
.အဖြေ။ ။ အစ်မ ဘယ်စာအုပ်ကိုမှ မြန်မာမှု မပြုပါဘူး။ မြန်မာမှု ပြု နိုင်လောက်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက် မရှိလို့ပါ။ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် အတိအကျကို ဘာသာပြန်တာပါ။ လုံးကောက်နီးပါးကို ပြန်ပါတယ်။ အဲလိုပြောရင် မယုံကြဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှန်ပဲ။ လုံးကောက်နီးပါးကို ဘာသာပြန်တာပါ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၃) အခု စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာအမှတ်-၂၁ / စာကြောင်းရေ-၆ မှာ “ရှေးအတီတေ” လို့ သုံးထားတာတွေ့တယ်။ မူရင်း စာသားလေး ထုတ်ပြစေချင်တယ်။
.Athanase had said then that any English-Canadian would be takingalong chance buying land inaparish that had been French since the river was settled.
.ထိုစဉ်က တောလဒ်သည် ရှေးအတီတေကတည်းက ပြင်သစ်တို့ ပိုင်လာသော စီရင်စုမြေပေါ်တွင် အင်္ဂလိပ်- ကနေဒီယန် လူမျိုးတစ်ယောက် မြေ၀ယ်ဖို့ ဆိုသည်မှာ ရခဲသော အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း၊
.အဲဒီစာပုဒ်ထဲက since the river was settled က ဒီစိန့်လောရင့်မြစ်ကြီး စတင်ဖြစ်တည်လာကတည်းကလို့ ဆိုလိုတာလေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းထောင်သောင်းကတည်းကလို့ တင်စားပြီး ပြောချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် ရှေးအတီတေ လို့ သုံးလိုက်တာပါ။ အမက ဆရာမြ စာအုပ်တွေ အဖတ်များတော့ သူ့လွှမ်းမိုးမှု အနည်းနဲ့အများ ရှိတာပေါ့။ ရှေးအတီတေ တို့၊ သမနိရှည် တို့၊ အထက်ကျော်ကာရီ တို့ဆိုတာ ဆရာမြ စကားလုံးတွေလေ။
. အလက်ဇင်း အခုလိုမေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒီနှစ်ဘ၀နှစ်ကန္တာက အစ်မ လက်အတွေ့ဆုံးစာအုပ်။ နောက်တစ်ခါ ပြန်ရေး၊ ဒါမျိုး မဖြစ်ဘူး။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ လုပ်လို့ရခဲ့တဲ့ဟာမို့ အနုပညာလက်ရာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်တယ်။ မေးခွန်းက နည်းတောင် နည်းနေသေးတယ်။ ပြန်ရှာပြီး အကုန်ဖြေပေးမယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၄) စာမျက်နှာ – ၁၆ / စာကြောင်းရေ – ၉ မှာလည်း ပြတင်းဆီ ခပ်ဖွဖွလျှောက်ကာ ဟိုဟိုသည်သည် “စူးစား” ကြည့်ပြီး… လို့ ရေးထားတာတွေ့တယ်။
.အဖြေ။ ။ As he crossed to the window he walked withapadding movement, looking out and peering from side to side ကို
.ပြတင်းဆီ ခပ်ဖွဖွလျှောက်ကာ ဟိုဟိုသည်သည် “စူးစား” ကြည့်ပြီး..
. စူးစား ဆိုတာကတော့ အစ်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပွဲဦးထွက် စာအုပ်ထဲမှာ တစ်လုံးစပြီး သုံးထားတယ်။ အမက ဆန်းပြားတဲ့စကားလုံး အဖွဲ့အနွဲ့ကို စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ သုံးတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၅) အောက်မှာ ထုတ်ပြထားတဲ့ စာပိုဒ်ကလေးကို မူရင်းဘာသာစကားနဲ့ တိုက်ကြည့်ချင်လို့…
မူရင်းစာပိုဒ် ထုတ်ပြနိုင်မလား ၊ စာမျက်နှာ ၇၉ က စာပိုဒ်ပါ။ … နွေဦးသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် အကောင်းဆုံးရာသီမဟုတ်သေး ။ ခရစ်တော်ကို ကားတိုင်တင်သည့်လရာသီမို့ မြေကမ္ဘာကို အမှောင်ထုလွှမ်းသည့် အချိန်အခါဟုဆိုလျှင်လည်း ရသည်။
ဟေမန္တ၏ အဦးအစဆိုလျှင် စမ်းရေအိုင်များပေါ်ဝယ် မိုးကောင်းကင်ကြီး၏ တစ်ပိုင်းတစ်စပုံရိပ်များက ဇော်ထိုးမိုးမျှော် ထင်ဟပ်နေပြီ ။မြရေညိုတို့၏ မျက်နှာပြင်ကား ပကတိမှန်ကြေးမုံသဖွယ် ။
သကြားပင်ကြီး၏ က္ကန္ဒနီလာ ညောင်းရွက်ညှာများ ဝေဟင်ထဲ ချာလည်ချာလည်ဝဲပြီးမှ မြေပြင်သို့ ခရရှာသည်။ .ရေလွှာပေါ်မှ ရော်ရီရွက်ကြွေများကား ပေါလောပေါလောနှင့် ရှပ်တိုက်ပြေးကာ ကမ်းခြေမှ ရေပူဖောင်းများကို ကြက်သွေးရောင် လိမ်းကျံပေးလိုက်သလို ရေပူဖောင်းများ နီမောင်းသွားသည်။ ဖိုးလမင်းကြီး ထိန်ထိန်သာသော တိတ်ဆိတ်ညမျိုးတွင် ဟိုးအဝေးဆီမှ ဘာသာဘာဝ ပျော်မြူးနေကြသော ဒရယ်ကြီးများ၏ ဟောက်သံကို နှစ်ကြိမ်တိတိ ကြားခဲ့ရဖူးသည်။
.အဖြေ။ ။ Spring was the bad time of the year. It was when they had chosen to crucify Christ, the darkness that had covered the earth. He tried to remember autumn. That was the time he liked best. In the autumn pools of water turned sections of the sky upside down and held them fast inamirror, while crimson maple leaves circled silently down from trees and struck the water and floated there, sendingaquick shimmer of scarlet across the dust of silver bubbles thick on the bottom. Twice last autumn, on silent nights withafull moon, he had heard miles away the cough ofarutting moose.
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၆) စာမျက်နှာ ၁၈၄ မှာ …စာပိုဒ် ဘာသာပြန်ထားပုံကလည်း အံ့သြစရာဖြစ်နေသမို့ မူရင်းစာပိုဒ်နဲ့ ယှဉ်ထိုး ခံစားကြည့်ချင်လာတယ်… “နွေဦးဆန်းမှသည် နွေပီပီ ကူသန်းခဲ့ပြီ။ ခိုင်ညှာပုရစ်ဖူးတို့ တစ်သွင်ထူးကာ ချပ်လွှာစိမ်းရင့်များအဖြစ် ပင်ယံထက် မြန်းတင့်လျက်ရှိပြီ။
မာကျစ်ရွှံ့ခဲတို့ မွလွယ်သော သည်ချိန်ခါသည် လက်စသိမ်းပျိုးချချိန်ဖြစ်၍ နယ်တစ်ခွင်လုံး ပျားပန်းခတ်မျှ အလုပ်များကြရပြီ။ ပျိုးချ၍ပင် မပြီးသေး ။ ဒန်းထင်းရှုးပေါရာ အဝေးတောအုပ်ဆီမှ
.အဖြေ။ ။ Spring leaped quickly into full summer that year. One day people woke and saw that the buds had become leaves and the mud dried into friable earth. There was great activity over all the parish as the planting was completed. Before it was finished the first blackflies appeared in the spruce of the distant forest; then they were in the maple grove on the ridge behind the Tallard land. By the Queen’s birthday on May twenty-fourth it was almost as hot as midsummer.
.The heat simmered in delicate gossamers along the surface of the plain, cloud formation builts themselves up through the mornings, and by afternoon they were majestic above the river. The first green shoots of the seeds that had been consecrated on Saint Marc’s Day appeared above the soil in the sunshine.
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၇) စာမျက်နှာ ၉၉ – ကြောင်းရေ ၂၆-၂၇ မှာ ပါတဲ့ စာပိုဒ်ကိုလည်း မူရင်းနဲ့ တိုက်ကြည့်ချင်သေးတယ်။ …..ရှေးယခင်ကဆိုလျှင် သူသည် သူ့ဘာသာသူ လွယ်လွယ်ကူကူ ပျော်ရွှင်နိုင်ခဲ့သည်။
.အဖြေ။ ။ He remembered how he had once been able to enjoy himself easily, how he used to liked food and occasionally to drink to excess inahighly witty and civilized way.
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၈) စာမျက်နှာ ၁၀၆ -ကြောင်းရေ ၁၄-၁၉
သူသည် ယမင်းရုပ်ကိုထုသည့် ပန်းပုဆရာလို ယမင်းရုပ်ကို စုံမတ်မြတ်နိုးပြီး ပုထုဇဉ်ဖြစ်အောင် အသက်သွင်းသည့် ဇာတ်ကို ကခဲ့သည်။ မာရီကား ဒေဝစ္ဆရာတမျှ လှရက်သူ ဖြစ်သည်။
လက်နှင့်လက်မောင်းအတွင်းသားတွင် သွေးကြောပြာများ မြမြရှိန်းလျက်။ နုနယ်သေးကွေးပုံမှာ ကုမ္မာရီလေးနှင့် မခြား….
.အဖြေ။ ။ Marie Adele’s delicacy and haunting innocence had fascinated the poetry in his nature. He had hoped to play Pygmalion in making herawoman of the world. She had been very beautiful. Withafigure always that ofayoung girl, she had been fragile and tiny, with veins distinctly visible under the skin of her hands and inner arms.
. Pygmalion ပြဇာတ်က ရှေးဟောင်း ဂရိ ပုံပြင်ပါ။ Pygmalion ဆိုတဲ့လူက ယမင်းရုပ်ကို ထုတယ်။ ထုပြီး အဲဒီယမင်းရုပ်ကို စုံမက်တော့ ယမင်းရုပ်အသက်ဝင်လာတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းပါ။ ဒီတိုင်းချည်း နာမည်ထည့်ရေးလိုက်ရင် ဖတ်တဲ့လူက ဘယ်သိမလဲနော်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မေးခွန်း(၉) .နောက်ထပ် မြန်မာဆန်တဲ့ ဘာသာပြန်အရေးအသားလေးတွေ မနည်းတွေ့ရသေးတယ်။ ဥပမာ… စာမျက်နှာ ၅၃၂ အောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာ… … သက်တမ်းရင့် စီရင်စုမြေများကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလာသော စိန့်လောရင့် မြစ်မင်းဧရာသည် အော်လင်းကျွန်းစုများကို ထွေးပွေ့လိုက်ပြီးမှ တဒေါက်စပ်စ်တွင် ကျယ်ဝိုင်းစွာ ခွေရစ်သွားသည်။ ၁၉၃၉ ခု၊ ဆောင်းဦးရာသီ၏ တောဟေဝန်ထဲ မြစ်နဒီစီးဝင်လာရာ ဆောင်းဦး၏ စုံတောပြားဟူသည် အလျှံတညီးညီး ဝင်းပနေခဲ့မြဲ ။ သကြားရွက်တို့က နီတျာတျာ ။ ဒါန်းထင်းရှူးနှင့် ထင်းရှူးပဒေသာတို့ကား စိမ်းရင့်ရွှေပြာ… ။ သစ်ခေါက်ဖြူရော်ရွက်တို့ကား.. ဇမ္ဗူရွှေသို့….
.အဖြေ။ ။ The Saint Lawrence, flowing past the old parishes, enfolding the New Orleans and broadening out in the sweep to Tadoussac, passed in sight of forests that flamed with the autumn of 1939: scarlet of rock maples, gold of beeches, heavy green of spruce and fir.
.ပြည့်စုံအောင် ထပ်ဖြည့်ပြီး ရေးပေးလိုက်တယ်နော်။ ကိုသူရကို အံ့သြနေရပြီ။ ဒီစာအုပ်က အစ်မကို အရမ်းလွှမ်းမိုးတယ်။ အစ်မရဲ့ အကောင်းဆုံး ပြန်ထားတဲ့ အပုဒ်တွေကို အတိအကျကို မေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အခု စာပုဒ်ကို ပြန်တာ ဘာမှသာ မဟုတ်တာ တစ်လကြာခဲ့တယ်။ ရေးလိုက်ပြင်လိုက်နဲ့ ကြာတာ။ ဒါချည်းပဲ ထိုင်လုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ခေါင်းထဲမှာ စာက အလွတ်ရနေတယ်။ တခြားစာတွေ ပြန်ရင်း ဒါကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် လုပ်တာပေါ့။
. ဒါပေမယ့် အခု မေးထားတာတွေက ဘာသာပြန်ပုံကိုပဲ မေးတာဖြစ်နေတယ်။ စာအုပ်ထဲက သဘောတရားကို လုံးဝ မထိတို့ထားသေးဘူးနော်။ မေးခွန်းတွေ ဆက်မေးပါဦး။ ရာချီသွားပစေ။
Alinn Z says: ပြုံးအန်တီရဲ့ အကောင်းဆုံး အားထုတ်ထားရတဲ့အပိုဒ်တွေကို သတိပြုမိပြီး
ဆွဲထုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ . . .
အဲဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှု မဟုတ်ဘဲ
ကျနော်ကိုက . . .”စကားလုံးတွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရေးသူ အားထုတ်ဖန်တီးထားတဲ့စကားလုံးလား?
ခပ်လွယ်လွယ် ရေးချလိုက်နိုင်တဲ့စကားလုံးလား ဆိုတာကို ခွဲခြား သိနိုင်လို့ပါ ”လို့
ကိုယ်ရည်သွေးချင်ချင် အဲ့ဒီ စကားလုံး ဖန်တီးမှုကို ဝေဖန်ပိုင်းဖြတ်ခြင်း အပိုင်းက ကျနော့် အားသာချက်ဆိုရင်
သဘောတရား ချင်းရာတွေကို ဝေဖန်ပိုင်ခြားမှုမှာတော့ အားနည်းနေသေးတယ်ဆိုရမယ်
ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်ပြီး ဝတ္ထုက လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ သဘောတရားအပိုင်းကို
.ဝေဖန်ဆွေးနွေးဖို့ နည်းနည်း ခက်နေတယ်။
.ဝေဖန်ကြ ဆွေးနွေးကြရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်မလဲ !!!
lu lu says: မေးတဲ့သူကလည်း မေးတတ်ပါတယ်
အခုလို ဘာသာပြန်စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်လာဖို့ အခက်အခဲ
တွေအများကြီး ရှိခဲ့မှာပေါ့ နော် မူရင်းစာအုပ်ရဲ့ အရသာ ပျက်မသွား
အောင် ဘယ်လောက်ထိ ကြိုးစားခဲ့ရလဲ သိချင်မိပါတယ်
အစ်မဝင့်ပြုံးမြင့် ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေလို့ 
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်ပါ့ လုလုရေ ။ အလင်းဆက် ညွှန်းလိုက်တော့မှ စာအုပ်ပိုကောင်းသွားသလိုပဲ။ တကယ်ပြောတာ။
lu lu says: အညွှန်းကောင်းလို့ ဆိုပေမယ့် အစ်မရဲ့ ဘာသာပြန် စွမ်းရည် က
ပို ပြီးထိရောက်ကောင်းမွန်လို့ ပါ ကိုအလင်းz အနေနဲ့ လည်းရှာကြံမေး ရတဲ့သူဆိုတော့ ဆီလိုအပေါက်ရှာမေးမှာပါပဲ ခုလို
မူရင်းစာပိုဒ် တွေကိုပါ ဖော်ပြပေးတော့ တကယ်မလွယ်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ ပိုသိရတော့ ပိုပြီးလေးစားအားကျမိပါတယ်
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဖယားဖယား စာ​ပေ​ရေးရာ​တေပါလား
မဆိုင်​ ဒာါမိုးေ​တွေက မိဂီတို့ နှူးဘာ ဂိုဏ်းနဲ့မဆိုင်​
Alinn Z says: ဒလောက် နာမည်ပါတပ်ပြီး ဆွဲခေါ်ထားကာမှ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မိဂီတို့ နျူးဘာဂိုဏ်းနဲ့ ဆိုင်တာ ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးက လစ်ဗြဲ နဲ့ ကွန်တစ် အားပြိုင်ပွဲ။ လစ်ဗြဲ ရှုံးတယ်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဘာာ
kai says: စာအုပ်မရသေးတော့.. မဖတ်ရသေးဘူး…။
In the autumn pools of water turned sections of the sky upside down and held them fast inamirror
အဲလိုပြန်တာလှပါတယ်..။ ဟေမန္တက… မြန်မာလို.. ဆောင်းပေါ့…။ ဟေမန္တ၊ ဂိမန္တ၊ ၀ဿန္တ မြန်မာတွေမှာ ၃ခုသာရှိတာမို့…
Winter,Spring, Summer, Autumn ၄ခုသောရာသီ တွေကိုဘယ်လို ဆက်ပြန်မလဲ.. သိချင်..။ ဆိုတော့…
ဟိုတနေ့က.. ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ “ဂျနီဗာကန်းရိုး၌”ကဗျာတောင်ပြန်သတိရမိသေး..
ငွေသွင် တိမ်ရိပ် ကူးသတည်း။
ကောင်းပါလေ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . သဂျီးရေ သဂျီး ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ။ မြန်မာစာရေးရတာက လူမျိုး နဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ရှုပ်နေတာဆိုတော့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ လည်း အဲဒါတွေ ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်က ကနေဒါ၊ ကနေဒီယန်။ ဒါပဲ ။ အဲဒါကို မြန်မာပြန်တော့ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ကနေဒီယန်လူမျိုး ပြန်ရမလား၊ ကနေဒါလူမျိုး ပြန်ရမလား မသိဘူး။ ဒါနဲ့ တော်ကြာ ကနေဒီယန် ဖြစ်လိုက်၊ တော်ကြာကနေဒါလူမျိုး ဖြစ်လိုက်။ စာအုပ်နောက်ပိုင်းမှာ စာရိုက်မှားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ကနေဒီယန်ကို စာရိုက်တဲ့လူက မှားပြီး ကနေဒီဖြစ်နေတယ်။ ထုတ်ဝေကာနီး အမှားပြင်ဖို့ ပေးလိုက်သေးတယ်။ သူတို့လည်း ရှုပ်ပြီး မပြင်နိုင်ကြဘူး။ ဒါနဲ့ စာလုံးပေါင်းမှားတွေ ပါပါရော။
Alinn Z says: မကြာခင် စာအုပ်ကို လက်ကကိုင်ဖတ်ရတန်ကောင်းရဲ့…
သူကြီးမင်းဆီ သယ်လာမယ့် သူကြီးမင်းရဲ့ ညီတော်မောင်ဆီတော့ စာအုပ်ကရောက်နေပြီ။
(စာအုပ်က အထူကြီးမို့)သယ်ရတာ လေးလို့ဆိုပြီး…မကျန်ခဲ့ပါစေနဲ့လို့…ဆုတောင်းရမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ထူးခြားတဲ့မေးဖြေပွဲ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်ပါတယ် အန်ကယ်ရေ။ ဒါပေမယ့် မေးတာကနည်းတော့ အားရစရာ သိပ်မရှိပါဘူး။ စာအုပ်က ထူတော့ တော်တော်နဲ့ ဖတ်လို့လည်း ပြီးကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ နယ်ကလူတွေကလည်း ၀ယ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုခေတ်က စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးက အောင်မြင်တဲ့စာအုပ်ဆိုရင်တောင် လွန်ရောကျွံရော အုပ်ရေ တစ်သောင်း လောက်ပဲ ရှိတာ။ လူဦးရေ နဲ့ အချိုး ချကြည့်တော့ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်ဘာကောင်မှ မဟုတ်မှန်း သိသွားတော့တာ … ဟီး။
ဦးကြောင်ကြီး says: မြီမာပြန် ဖတ်တာတောင် အဲလောက် သီကုံးနေလျင် အင်းဂီလိပ်လို့ စိုလျင် ပေါမနေနဲ့တော့.. ပထမ စာမျက်နှာဂနေ တက်မည် မှုတ်တော့စ်..။
Kaung Kin Pyar says: နှစ်ဘ၀ နှစ်ကန္တာကိုဖတ်ချင်နေတာ…။ စာအုပ်ကို မြင်တော့ မြင်လိုက်ပြီး မကြင်လိုက်ရ….။ ဘာသာပြန်ထားပုံတွေကြည့်ပြီး အားကျမိပါတယ်…။
စာအုပ် အညွှန်းနဲ့တင်…ဖတ်လို့ကောင်းမယ့် စာတစ်အုပ်ဖြစ်မှန်း သိသာနေပြီ….
နာ စာအုပ်ထုတ်ရင်လဲ နာ့စာအုပ် ပေါက်ထွက်သွားအောင် နီညွှန်းရမယ်ညှော်…ဆက်ဆက်…။
ဦးကြောင်ကြီး says: နာ စာအုပ်ထက် နှာစာအုပ်ဆို ပိုကောင်းမဲ ကင်းကောင်ပြာလေး..။ လက်တွေ့ဘွမှာပါ စာအုပ်ထဲကလို မင်းတမီးနဲ့မင်းဓါး လုတ်ကြဇို့..
Mike says: .စာအုပ်တော့မဖတ်ရသေးပါဘူး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဦးကြီးမိုက်ရေ
.ကျမရဲ့ အရေးအသားတွေ ခေါက်ထားလိုက်စမ်းပါ။ နဂိုကောင်းပြီးသား စာအုပ်ကို ကျမက အမြတ်ထုတ်ထားတာပါ။ တကယ်က စာအုပ်ထဲက သဘောတရား။ အဲဒါ အရေးကြီးတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဝယ်ဖတ်ဦးမှပဲး))
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ အမပြန်တဲ့စာအုပ်မို့လို့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီစာအုပ်မျိုးက တစ်ခုခုကို သင်ယူလိုက်သလိုမျိုးပဲ။ အခုက အရေးအသားအကြောင်းတွေပဲ ပြောနေတယ်။ တကယ်က အတွင်းအနှစ်ကြီးတယ်။ ဘာသာပြန်ချက် ညံ့တယ်ဆိုရင်တောင် နဂိုမူလအကြောင်းရင်းခံက အနှစ်သန္ဓေကြီးနေတယ်။ ဦးနှောက်ကို လမ်းဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးမှ ဖတ်ကြည့်။ လူငယ်တစ်ယောက် ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ တော်ရုံအရည်အချင်းနဲ့ မပေါက်မြောက်ပါဘူး။ ကနေဒါရဲ့ ဂန္ဓ၀င်တန်းကို ၀င်နေတဲ့စာအုပ်ဟာ နှယ်နှယ်ရရလေး ဟုတ်ကိုမဟုတ်စေရဘူး။
တောင်ပေါ်သား says: အမပြုံးရေ
အမေက သင်္ကြန်တွင်းမှ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်မယ်တဲ့ ၊
အမကို အမေက သိပါသတဲ့ ၊
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အန်တီရွှေကူမေနှင်းကတော့ ကျမရဲ့ မြင်ဆရာတစ်ပိုင်းပါပဲ။ ခုထိ ဂျာနယ်ထဲမှာ သူ့ဆောင်းပါးဆို မလွတ်တမ်း ဖတ်ဖြစ်နေတာ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ဖတ်ခဲ့တယ်။ ခုလည်း ခေတ်မီနေတုန်းပဲ။ စိတ်ထဲမှာ ရွစိရွစိဖြစ်နေတာလေး တောင် ရှိတယ်။ တော်ကြာ စိတ်ဆိုးသွားမှာစိုးလို့ မပြောတာ။ ဒီလိုလေ၊ အမေက လစ်ဘရယ်ဖြစ်နေတယ်နော်။ သားကတော့ ကွန်တစ် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လား မသိဘူး။ သားက အမေလောက် မတော်တာ၊
တောင်ပေါ်သား says: လစ်ဘရယ်တွေ ကွန်တစ်တွေ သိပါဘူးဗျာ ဘယ်သူ့ထက်တော်ရမယ်လို့လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးဖူးဘူး ၊
မနေ့ကကျနော်ထက် ဒီနေ့ကျနော်က ပိုမညံ့သွားရင် တော်ပါပြီ ၊
Wow says: အနော်က တွတ်ပီတို့၊ ဦးပြောင်ရှင်းတို့၊ လေးလေးပိုးဇာ၊ ပြာဂလောင် ပြာလချောင် လောက်ပဲ ဥာဏ်မှီတာရယ်… ကိုယ်မမှီတာ ၀င်မဆွေးနွေးတော့ဝူးနော်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အချစ်ဝတ္ထု သန့်သန့်လေး တစ်အုပ် ထွက်ဖို့ရှိတယ်။ အဲဒါထွက်ရင် ဝေါင်းကို လက်ဆောင်ပေးမယ် ဟိဟိ။
Ma Ma says: သင်္ကြန်တရားစခန်းဝင်ခါနီးမို့ စာအုပ်တွေ မဖတ်ရဲသေးဘူး။
ဖတ်ပြီးရင် စိတ်ထဲစွဲပြီး ဂယောင်ချောက်ချားဖြစ်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မဖမ်းနိုင်မှာစိုးလို့ သင်္ကြန်ပြီးမှပဲ ဖတ်တော့မယ်။
kai says: ကြည့်… အဲဒါပြောချင်တာ…
ဟိုက်ဘရစ်သာသနာဟာ.. မြန်မာလူမျိုး အလုပ်လုပ်ကောင်းအရွယ်ကောင်း…အတွေးကောင်းတွေရဲ့.. အချိန်တွေဘယ်လောက်ခိုးယူသွားတယ်..။ ခိုးယူနေဆဲ..ခိုးယူလတံ့ဆိုတာ…။
နောက်ပြီးတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဖူးလို့..မဆိုလိုဘူးနော..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: မနောက်ပဲ တကယ်ပြောတာဆိုတာ ယုံပါတယ် သဂျီးရယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်မို့ သံသရာဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်တယ်။
ကုသိုလ် အကုသိုလ်က အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်တယ်။
အဲဒါကြောင့်လည်း သတိပဌာန်ဝိပဿ နာတရားကို ရနိုင်သလောက် ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့လည်း ယုံကြည်တယ်။
လုပ်နိုင်တယ်လို့ မပြောဘူးနော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: ဆက်ဆက်ညွှန်းတဲ့ အရေးအသားကြောင့်ရော
မပြုံးညွှန်းတဲ့ သဘောတရားကြောင့်ရော စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ချင်လာတယ်
၅၃၄ မျက်နှာ ဆိုတာကိုတော့ လန့်မိတာ အမှန် ပဲ
ဟိုနေ့ က တစ်တစ်နဲ့ တွေ့တော့တောင် ဒီရောက်တုန်း လစ်လစ်နဲ့ပါ တွေ့ဖြစ်ရင် ကောင်းမှာလို့ ပြောမိသေးတယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အမ်၊ တစ်တစ်က ဒီပြန်ရောက်နေတာလား။ ဒါကြောင့်မို့ ရွာထဲ ပျောက်နေပါတယ်လို့၊ ဒီလည်းပြန်ရောက်ကော ရွာထဲ ပျောက်သွားတော့တာပဲ။ သတ္တိကတော့ ကောင်းပါ့။
.အဘနိုဇိုမီ၊ အဘတို့အနေနဲ့ တစ်ခုပဲ စဉ်းစားကြည့်။ ငပိရည် နဲ့ တို့စရာ စားပြီး တစ်သက်လုံး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာ နေသွားလို့ရတယ်။ ကာဗီယာငါးဥ မြည်းကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။ အရသာ မသိတော့လည်း စားချင်လိုက်တာလို့ တောင့်တနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ နော်။ အဲဒီသဘောသွားပါပဲ။ ဦးနှောက်ကို အစာကျွေးတဲ့နေရာမှာ ငပိနဲ့ကျွေးလည်း ဖြစ်တယ်။ ပုဇွန်ထုပ်ကြီးနဲ့ ကျွေးလည်းဖြစ်တယ်။ ပုဇွန်ထုပ်ကြီး မစားဖူးရင် ဒါကို စားရကောင်းမှန်းလည်း မသိ။ အရသာလည်း မသိဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် ပုဇွန်ထုပ်ကြီး မစားလည်းဖြစ်ပေမယ့် ပုဇွန်ထုပ်ကြီး စားဖူးရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ မျှစ်စာအုပ်ကတော့ ပုဇွန်ထုပ်ကြီးပါ၊ အဟီး ….
Crystalline says: အစ်​မ​ရေ… အရမ်းဖတ်​ချင်​သွားပြီ… စာအုပ်​ကြိုက်​တဲ့ညီမ​တော်​အတွက်​လည်း
ဝယ်​ထည့်​​ပေးမယ်​… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ခွစ်က အခု ဘယ်မှာနေတာလဲ။ စာအုပ်ဝယ်ဖို့ ခက်မယ်ထင်တယ်။
အူးစည် says: လစ်ဗြဲတွေ ရှူံးဒယ်ဆိုဒေါ့..
ကွန်ဗေးဖြစ်တဲ့ ကျော့်မိန်းမဘဲ ဖတ်ခိုင်းလိုက်ဒေါ့မယ်ဗျာ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .လစ်ဗြဲတွေ ရှုံးတယ်။ နောက်တော့ ကွန်ဗေးတွေလည်း ရှုံးသွားတယ်။ အရင်းရှင်စနစ်က လွှမ်းမိုးအသာစီး ရသွားတယ်။ ဇာတ်သိမ်းမှာ မင်းသား ပေါလ်လေးက အားလုံးကို သဘာဝကျစွာ အနိုင်ရလိုက်တဲ့အပေါ် စာဖတ်ပရိသတ် ကျေနပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အူးစည် says: နောက်တာပါနော်.. ဆရာမ ပြုံး.. ရန်ကုန်ပြန်ရင် ရှာပြီး တစ်က ဖတ်မဲ့ စာရင်းမှာ
ဆရာမက တစ်ပါနော့..။ ဘယ်သူနိုင်နိုင်ပါ စာရေးသူပေးချင်တဲ့ ရသနဲ့
ကိုရင်စည်… ။ ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ရွာပြန်ရင် ဝယ်ဖို့စာရင်းမှာ မျှစ်ရဲ့ဒီစာအုပ်ကို မှတ်ထားလိုက်ပြီ …
အခု ကလေးတဘက်နဲ့ဆိုတော့ … အတော်အချိန်ယူပြီးဖတ်ရမယ်ထင်ရဲ့…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ခေါင်းအုံးအိပ်လို့လည်း ရပါတယ် ကျောက်စ်ရဲ့။ ၂မျိုး အသုံးဝင်တယ်။ ကလေးထိန်းရင်းဖတ်၊ မောရင် ခေါင်းအုံးအိပ်။
kai says: စာအုပ်က..ညီတော်မောင်သယ်လာပြီး.. အမေရိကရောက်လာတဲ့သဘောမှာရှိတယ်..။
ခုလာမယ့် ယူအက်စ်သမ္မတရွေးပွဲမှာ.. အလှည့်ကျတဲ့ရီပါ့ဗလစ်ကင်န်ဖက်က၀င်ပြိုင်မယ့်သူတွေထဲ… ထိပ်ဆုံးရောက်နေသူက.. ကနေဒါမှာမွေး.. ကနေဒီယန်ဖြစ်ဖူးတဲ့.. အမေရိကန်တဲ့…။
သူက.. တီးပါတီထောက်ခံမှုကောင်းတဲ့သူမို့.. ကွန်ဆာဗေးတစ်တာမှ.. တော်တော်တစ်တဲ့သူ..။
naywoon ni says: ဆရာမ​ရေ စာအုပ်​က​တော့ မဖတ်​ရ​သေးဘူး ။ ကျ​နော်​က ​ခေါင်းစဉ်​ ​ပေးတာကို စိတ်​၀င်​စား​နေတာ ။ Solitude ဆိုတာ ကျ​နော်​ဆီမှာရှိတဲ့ အဘိဓာန်​​လေးမှာပြန်​ကြည့်​​တော့ (၁) အထီးကျန်​ဖြစ်​ခြင်း (၂) အထီးကျန်​​ဒေသ တဲ့ ။ အဲ့ဒိ​တော့ “Two Solitude ” ကို “နှစ်​ဘ၀ နှစ်​ကန္တာ ” ဆို ​ပေးမိတဲ့ အ​တွေး​လေး သိချင်​သား ။ ကန္တာ ဆိုတဲ့ အသုံးက သိပ်​မရှိဘူး​လေ ။ ကျန်​​တော်​ စဉ်​စားကြည့်​​တော့ “​နွေကန္တာဦး ဆိုတဲ့ အသုံးပဲ စဉ်းစားလို့ရတယ်​ ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက် မင်းသား နဲ့ မင်းသမီးက ဘ၀ချင်းခြားတယ်။ ခြားတယ်ဆိုတာ ကနေဒါမှာ အင်္ဂလိပ်အနွယ်နဲ့ ပြင်သစ်အနွယ် ဖြစ်နေတယ်။ ဇာတ်ကောင် နှစ်ယောက်စလုံးဟာ တိုင်းပြည်ထဲက အစဉ်အလာတွေရဲ့ ကွပ်ညှပ်မှုကို ခံနေရတယ်။ ဒီခေတ် ကျမတို့ မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေလိုပေါ့။ မလှုပ်သာ မလှည့်သာ။ မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာတွေ။ ဘာသာရေး။ လူမျိုးရေးတွေရဲ့ ကွပ်ညှပ်မှု ကို အရမ်းခံရတယ်။ လူကြီးတွေက လူငယ်တွေပေါ် တက်ထိုင်နေတယ်။ ဘ၀ချင်းခြားပြီး သိပ်ပြီး အထီးကျန်ဆန်တယ်။ အဲဒါကို ကန္တာရ နဲ့တင်စားပြီး ဘ၀နှစ်ခု ကန္တာရ နှစ်ခုလို့ ပြောတာပါ။
Ma Ei says: စာအုပ် အညွှန်းကောင်း…အပြင်…
အရသာရှိရှိဖတ်လိုက်ရတဲ့ လှလှပပ စာ…
Alinn Z says: ကျနော် စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ရင် ကျနော့်စာအုပ်ကို ဘယ်သူ ညွှန်းပေးမလဲ…. ငင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တီမမ သင်္ကြန် တရားစခန်းဝင်ပြီး coc ဆော့မလို့လား။
.မွအိ အရသာရှိပါတယ်နော်။ ပုဇွန်ထုပ်ကြီးလို့ ညွှန်းပြီးသား။
မြစပဲရိုး says: ညီမပြုံး
စာအုပ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မိဘမဲ့ တိုင်းပြည် က မထွက်သေးတာလား။ ရောင်းကုန် သွားတာလား။
စာအုပ်ဆိုင်တွေ မှာ ” နှစ်ဘဝ နှစ်ကန္တာ” ဘဲ ရှိနေတာမို့ မေးကြည့်တော့ မရှိရင်ကုန် နေလို့ လို့ ဖြေကြတယ်။
မဖတ်ရသေးပေမဲ့ အမြည်း မိတ်ဆက်ထားတယ်။
ဘေးကလူ ကတော့ စဖတ်ပြီး လက်ကမချတော့ပါ။ အတော်လေး အဆင့်မြင့်တာ ဘဲ လို့ တော့ ဝေဖန်တယ်။
သူလဲ အပြီးမသတ်နိုင် သေးဘူး။
ပြီးရင်တော့ ဝေဖန်ရေး ဝင်ပေးပါ့မယ်။
ဒါမှ တာဝန်ကျေ မှာ လို့ ခံယူပါတယ်။
မနေ့ ညဦး က ပြန်ရောက်တယ်။
. ရောက်ရောက်ချင်း ထိုးအိပ်ပြီး နိုးတာနဲ့ ရွာထဲ ဝင်ပါတယ်။
ထိပ်က စာ မို့ ချက်ချင်းဘဲ မန့်ပါတယ်။
ကိုနို ရဲ့ ဆန္ဒ ကိုလဲ တစ်နေ့ ဖြစ်မြောက် အောင် ကြိုးစားချင်ပါတယ်။
လစ် နဲ့ တစ် တွေ့ပွဲ ပေါ့။
တစ်တစ် လို့ စာတန်းချိတ်ပေးလဲ မငြင်းလိုပါလေ။
လတိုင်း ဘုရားကိုးဆူ ကပ်သင့်တယ်လို့ ပြောပြော နေတဲ့ တစ်ဖက် အမေ့ ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ ဒီ တစ်ခါ ဆွမ်းတော်ခွက် သေးသေးလေး နဲ့ ရေချမ်းခွက် သေးသေးလေး ကိုး ခွက်စီ ဝယ်ခဲ့ တယ်။
လောကကြီး ထဲ လူလူချင်း ဆက်ဆံရေးမှာ မေတ္တာ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ကို ရှေ့ထား မှ အောင်မြင် မယ်လို့ ယူဆ ထားသူမို့ သူ့ ကို တရာပြ ချင်ရင် ကိုယ့်စကား နားထောင်ဖို့ သူ အလို ကိုလဲ လိုက်ပေးမှ မျှတ တော့ မပေါ့။
သူ့ အယူ အဆ က ကိုယ် ယုံတာ မယုံတာ တပိုင်း၊ သူ့ အလို ကို လိုက်ပြီး ကိုယ့် စကား ကိုလဲ သူ့ဆီသွင်း ဖို့ လိုရင်းလေ။
သူပြောတာ လုပ်လို့ လဲ မကောင်းတာ ဖြစ် မှာ မှ မဟုတ်တာ။
ဘာလို့ ထိပ်တိုက် တွေ့ တော့ မလဲ။
့လက်ယာကပ်မောင်း စနစ် ထဲ လက်ဝဲ ကပ်မောင်း နေလို့ မှ မရတာ လေ။
တိုက် ကုန် တော့ မပေါ့။
ညာမောင်း မှာ ဘဲ ကျင့်သားရ နေတာမို့ ဘယ်မောင်း လို့ မရ တော့ ဘူး ဆိုသူ တွေ ဟာ တကယ်တော့ ညံ့တာပါ။
ကိုယ်ဘာလုပ် ရမယ် ဆိုတာ အသေအချာ သိရင် ဘယ်မောင်းမောင်း၊ ညာမောင်းမောင်း ဘယ်စနစ် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုရာ ရောက် အောင် သွားနိုင်ပါတယ်။
ညီမပြုံး ပြောတဲ့ သတ္တိကောင်း ပုံ အကြောင်း ကတော့ ကိုနို လဲ သိသွားပါတယ်။
အားလုံး ကို အိတ်ထဲ တောင် ထည့်လိုက်ချင်သေး။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အမလတ်ရေ
အင်္ဂလန်ပြန်ရောက်ပြီလား။ ဒီမှာနေတုန်းက အစားအသောက် ပြသနာ ပေါ်သေးလား။ အင်္ဂလန်မှာပဲ နေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာမ ၀င်ဒီလောရုံ ကိုသိလား။ အန်တီဝင်ဒီက မြန်မာပြည်မှာ မုန့်ဟင်းခါး စားတယ်။ စားပြီးတော့ ထိုင်းကိုလည်း ရောက်ရော ၀မ်းလျှောပါလေရော၊ ဆေးရုံတင်ရတယ်။ လမ်းကိုမလျှောက်နိုင်တော့တာ။ အကြောဆေး သွင်းရတယ်။ ထိုင်းမှာ ကြာနေပြီး အင်္ဂလန်ကို ဧပြီ ၄ရက်နေ့ရောက်ရမယ့် အစား ၁၀ ရက်နေ့မှ ရောက်တယ်။ သူက သူ့ကိုယ်သူ သေပြီတောင် ထင်တာ။ ခက်တာက သူနဲ့အတူတူ စားတဲ့လူတွေက ဘာဆိုဘာမှ မဖြစ်ကြဘူး။ အန်တီ ၀င်ဒီ တစ်ယောက်ထဲ ကွက်ဖြစ်တာ။ အသက်ကလည်း ၆၇ ဆိုတော့ ခံရတာပေါ့။ သူပြောတော့ မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်က ပွက်ပွက် ဆူနေတယ်။ ရောဂါပိုးမွှား မအောင်းနိုင်ဘူးတဲ့။ အဲဒီ ၀မ်းလျှောကိစ္စ ဘယ်ကအစရှာရမလဲ မသိဘူး။
kai says: ပွက်ပွက်မဆူနေတဲ့.. နံနံပင်ရယ်..။ ငရုပ်သီးမှုန့်ရယ်..။ ငန်ပြာရည်ရယ်.။ အကြော်ရယ်..။ နောက်ဆုံး.. ထည့်တဲ့ခွက်..ဇွန်းတွေမှာရှာပါလ်ို့..။
မန်းဂဇက်က.. ၀င်ဒီလောရုံသမီး.. ဂျိုစလင်းစီးဂရေ့နဲ့အင်တာဗျိုးလုပ်ဖူးတယ်..။
မြစပဲရိုး says: အစား အစာ အကြောင်း ကို ပထမ ပြောရရင် တော့ အပြင် က မုန့်ဟင်းခါး ကိုတော့ မစားရဲ တာ အမှန်ဘဲ။
. အဓိက ပြသနာ က မုန့်ဖတ် မှာ ရှိမယ် ထင်တယ်။ သူကြီး ပြောတဲ့ အချက် တွေ ကလဲ ပါနိုင်ပါတယ်။
. ဒီတစ်ခေါက် အိမ်မှာထက် ဆိုင်ကြီး တွေ မှာ စားခဲ့ ရတာများတယ်။ တရုတ်စာ နဲ့ ယိုးဒယားစာ တွေ အများစုဘဲ။
. အဲဒါတွေ က ချိုရဲရဲ နဲ့ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ မရ။ ကျွေးသူ က စေတနာ နဲ့ ကျွေးတာ ငြင်းလို့ မကောင်း။
. ဈေးကလဲ မတရား ဈေးကြီး သေး။ သူတို့ ကတော့ သိန်းချီ ရှင်းရတာ ကို ဒီလောက်လေး ကိုများ တဲ့။
. ကိုယ့်မှာတော့ ဘုရားတနေမိတာ။
. အဲဒါတွေ စားပြီး သတိထားမိလာတာ က မျက်နှာ နဲ့ ခြေထောက် တွေ ဖော လာတာ ဘဲ။
. အဲဒီ အစာ တွေ ကို ရပ်လိုက်မှ ပြန်ခါနီးချိန် ဖောတာ ကျ သွား တော့ တယ်။
. သူငယ်ချင်းများ ညည်းကြတယ်။ ဝ လို့ တဲ့။
. ဆီ တွေ နှစ် နေတဲ့ အဲဒါတွေ ကို စားနေကြမှ ပိန်စရာ လမ်း ရှိပါတော့ မလားဘဲ။
. မြန်မာပြည်က လူ တွေ အစား စားတာ မှာ အတော်လေး ပိုက်ဆံ ဖြုန်းနေကြတာ ကို ဒီ တစ်ခေါက် သိသိသာသာ တွေ့လိုက်တယ်။
. စားစရာ ဆိုင်တိုင်းလိုလို မှာ လူ အပြည့်။ ချမ်းသာသူ တင်မက နွမ်းပါးသူ တွေလဲ ဝယ်စား နေတော့တာ။
. ဟင်းသီး ဟင်းရွက် များများစား ဖို့ အတွက် အခွင့်အရေး ရှိနေပါရက် နဲ့ အချိုမှုန့် နန်းချင်း အစား တွေ ကို မက် နေဖို့ မသင့်ဘူး။
. ဒါဟာလဲ မြန်မာပြည် ထဲ မှာ ချဲလင့် တစ်ခု ဘဲ။
. နောက်ပြီး ဆံပင်ဆေးဆိုး ခြင်း။ လမ်းပေါ် လူငယ်တွေထဲ ၁၀ ယောက်မှာ ၇ ယောက်လောက် ဆိုး နေသလားဘဲ။
. တစ်နေ့ ကားဘေး မှာ ပိုက်ဆံ လာတောင်း တဲ့ ကလေး တစ်ယောက် ခေါင်းမှာ အဝါ ရောင် နဲ့။
. ဒါကို ဘေးက လူ က “မင်း ခေါင်း ကို ဆိုးဖို့ ပိုက်ဆံ က ဘယ်လို ရသလဲ” လို့ မေးလိုက်တာ မျက်စောင်းထိုးပြီး ထွက်သွားရော။
. ဒီလို ဈေးပေါ တဲ့ ဆိုးဆေး တွေ က ကိုယ့် ဆံပင် တင်မက ခေါင်းအရေပြား ကို ဘယ်လို ဒုက္ခပေးမယ် ဆိုတာ သူတို့ မှာ သိနိုင်ဖို့ အခွင့် မရှိကြဘူး။
ဒုတိယ က “လူတွေ ရဲ့ တာဝန်ယူ မှု စိတ်ဓာတ်”
တစ်ခုခု ဖြစ်ချိန် သူများ ကို လက်ညိုးထိုး လိုက်တာ ထက် ကိုယ့် ဆီ မှာ အရင် တာဝန်ယူတတ်တာ။
အရမ်း ကို အတုခိုးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
နယ်သာလန် က ထွက်တဲ့ မလေးရှားလေယာဉ် ပျက်ကျ တုန်း က အရှေ့တိုင်းသား များ လေဆိပ် မှာ ဆိုင်ရာ ကို ဒေါသတကြီး ရန်လုပ် နေချိန်
Amsterdam ကနေ ပါသွား တဲ့ ဒတ်ခ်ျ တွေ ရဲ့ မိသားစုများ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နဲ့ ဝတ်ပြု နေခဲ့ ကြ တယ်။
. ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်တာဝန် ကို ကိုယ် ယူ မှု ရှိတဲ့ လူ ဆိုတာ ရဲ့ နောက်ကွယ် မှာ အခြား သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်း တွေ လဲ အများကြီး ပါပါတယ်။
. တနည်း လူ ကို လူ လို ဆက်ဆံခံ ရတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် က လူ များ ဟာ ဒီ လို တာဝန်ယူတတ်မှု ပိုပြီး ရှိ ကြမှာပါ။
. ပြောချင်တာ တွေကတော့ ရင် နဲ့ မဆန့်ဘဲ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ပြောချင်တာတွေ ရင်နဲ့မဆံ့ဖြစ်နေတုန်း မြန်မြန်ချရေးနော်။ မေ့သွားမှာစိုးလို့။ အဓိက အစားအသောက်ပေါ့။ ကျမလည်း ဒီလိုပဲ ထင်တယ်။ မြန်မာတွေ ပိုက်ဆံဖြုန်းတယ်လို့။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: I hold myself, and only myself, responsible for getting sick. Knowing it’s unsafe to eat or drink anything outside reliable restaurants or the homes of friends while in Myanmar, I should have been more careful. I’m still not certain exactly where I picked up the infection,
အန်တီဝင်ဒီကတော့ အဲလိုပဲ ရေးပါတယ်။ မျှစ်ကတော့ မျက်နှာပူတယ်။ မြန်မာပြည်အစား တောင်းပန်ထားတယ်။ အန်တီဝင်ဒီက အရမ်းအံ့သြဖို့ ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး၊ အင်္ဂလိပ်စာကလည်း ပြိုင်စံရှား။ မြန်မာပြည်က လူတွေ ပြည်ပရောက်ကုန်ရင် မထင်လောက်အောင် တော်ကြတယ်နော်။
မြစပဲရိုး says: . နေရင်းနေရင်း ပုံမှန် routine ထဲ ပြန်ဝင်သွားရင် မဖတ်ဖြစ်မှာ စိုးလို့ မပြီးပြီးအောင် အားယူပြီး ဖတ်ခဲ့ပါပြီ ညီမပြုံးရေ။
ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေ မဖတ်ဖြစ်တာ ဆယ်စုနှစ် ကိုတောင် အတော်ကျော်နေလောက်ပါပြီ။
ဒီ စာအုပ် ကို ဖတ်ရင်း မှော်ဝင်သလို အသေးစိတ် ဖြေးဖြေး ဖတ်နေမိရော။
. နောက်ပိုင်း မပြီး ဘဲ ကြာနေမစိုး လို့ နဲနဲသော့ဖတ်လိုက်ရတယ်။
. မူရင်းစာရေးသူ ရဲ့ အသုံးက ဘယ်လိုနေမယ် လို့ ကိုယ့် ရဲ့ ညံ့ဖျင်းလှတဲ့အရည်အသွေး နဲ့ မဖတ်ရဲ။
. ပြုံးစာအုပ်ထဲက စကားလုံး တွေ ကတော့ လှပလွန်းတာ အညွှန်းထက်တောင် ပိုကောင်းမလားဘဲ။
မူရင်း ကို နဲနဲမြည်း ပြီး တွဲ ဖတ်ကြည့်တဲ့ အနားကလူ က တော့ “တော်လိုက်တာ” တဲ့။
သူသာ ပြန်ရင် စာတွေ ကို ဘယ်လိုချောအောင် ရွေးပြီး ရေးရမယ်မသိ တဲ့။
. ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပါရမီချင်း တူမလားလို့။
ဟုတ်တယ်လေ။ အင်္ဂလိပ်လို မိုးပျံအောင် ဖတ်နိုင် ရေးနိုင်တိုင်း ဘာသာပြန် ကောင်းကောင်း ရတာမှတ်လို့။
. ကိုယ့်ညီမကို မြှောက်တာမဟုတ်ပါ။ အဲဒီအတိုင်း တကယ်ပြန်ပြောခဲ့တာပါ။
ဘာသာပြန် အရေးအသားပိုင်း ကို ပြီး တော့ ဇာတ်လမ်းပိုင်းပေါ့။
မတူတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခု က နေ ဖြစ်လာတဲ့ သမားရိုးကျ အချစ်ဇာတ်လမ်း လေး က အင်မတန် ကြီးကျယ် တဲ့ ဇာတ်အိမ် ကြီးထဲ မှာ ရှိနေခဲ့တာလို့ မြင်လိုက်ပါတယ်။
ကနေဒီယန် တိုင်းဖတ်ခဲ့ ကြမဲ့ ဂန္ဓဝင်စာအုပ်လဲ ဖြစ်မှာပါ။
၁၉၄၅ က ထွက်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဆိုတော့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ရှိပြီ။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အသက်အတူတူပေါ့)
ကနေဒါ မှာတော့ အဲဒီ ဇာတ်ကြောင်း တွေ က သမိုင်းဟောင်းဖြစ်နေလောက်ပြီ ထင်ရဲ့။
ရှေးအဖိုးကြီး တွေ က ဒီလောက်မဟုတ် ဘဲ ဟိုဘက်ဒီဘက် အစွန်းရောက် နှစ်ယောက် က မားရပ်စ် နဲ့ ဂျက်နက် လို့ မြင်မိတယ်။
မားရပ်စ် က ပြင်သစ်မျိုးချစ် အင်္ဂလိပ်မုန်း ကက်သလစ်ဘာသာရေး သမား။
ဂျက်နက် က အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကြီးဝါဒစွဲ ပရိုတက်စတင့်။
အစ်မ အမြင်မှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးလုံး က ကိုယ်စွဲကိုင်မိပြီးသား ရှေးရိုးအစဉ်အလာ တွေ အတွက် ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြ တဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ် တွေ ပါဘဲ။
အဲဒီ ရှေးရိုးစွဲ နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က အမုန်းတရား အာဃာတတွေ နဲ့ ပြည့်နေခဲ့သူ။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ်ကမှ ကြီးမြတ်ပြီး ကျန်သူတွေ ကို အထင်သေးစိတ်ရှိသူ။
သူတို့ နှစ်ဦး ရဲ့ အပူမီး တွေ က ကျန်သူတွေ ကို ကူးလောင်စေတာ လို့ မြင်ပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ နောက်မှာ ဖြစ်နေတာက
အရင်းရှင်စနစ် လို အလုပ်ရုံ တွေ နဲ့ ခေတ်မှီအောင်ပြောင်းလဲချင်တဲ့ လူစု နဲ့
ဒီ အတိုင်း ဘာမှ အပြောင်းအလဲ မလုပ်ချင် ဘဲ စက်ကိရိယာ တွေ သုံးပြီး တိုးတက်လာမှာ ကို ကြောက် နေတဲ့ လူစု အားပြိုင် ခဲ့တာ ဖြစ်မလားဘဲ။
နောက်ဆုံး ရေအားစက်ရုံ ဆောက်နိုင်ခဲ့တာ မို့ စက်မှုခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး အောင်မြင်သွားတဲ့သဘော ဖြစ်ခဲ့တာလို့ မြင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းထားတာ ကလဲ လှ တယ်။
အပိတ်ပိုင်း မပြောခင်မှာ မင်းသမီး ရဲ့ အမေ စိတ်လျှော့လိုက်တာကို ပြခဲ့တာဖြစ်မလားဘဲ။
အပိတ်စာထဲ မှာကျတော့ two solitudes ဟာလဲ စစ်ဖြစ်လိုက်တော့ အင်္ဂလိပ်စပ်တွေ၊ ပြင်သစ်စပ်တွေ လို့ သွေးကွဲ မနေနိုင်တော့ဘဲ နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ one society ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုချင်တာလား။
အတော်လေး မြင့်တဲ့ စာသား အတွေးအခေါ်တွေ ကို မမှီတမှီ လှမ်းပြီး တို့လိုက်ပါတယ် ညီမရေ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လို့ မခေါ်ရင် အမေရိကား ကို တိုက် နဲ့ ရောကုန် မဲ့ အဖြစ်ရှိလို့ ဆိုတာ (ဆရာ)နတ်နွယ် ရဲ့ ကနေဒါသမိုင်းထဲ တစ်စွန်းတစ တွေ့ပြီး သဘောပေါက်လိုက်သလိုဘဲ။
ကနေဒါ ကလဲ အဲဒီ တိုက် ရဲ့ တစ်စွန်းဘဲ မဟုတ်လား။
မြစပဲရိုး says: ဝတ္တုထဲ မပါတဲ့ ချစ်သောဧရာဝတီ အကြောင်း ကို ထင်တာပြောရရင်တော့
. မြစ်ဆုံအတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေခြင်းရဲ့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာမို့ ဇာတ်လမ်းထဲကလို လူနှစ်စု ရဲ့ ပြသနာထက်ကြီး တယ် ထင်ရဲ့။
တစ်ချို့က ကမ္ဘာမှာရာသီဖောက်ပြန်တာ တွေ ကို ပိုပြီ မဆိုးအောင် ကာကွယ်ဖို့ သဘာဝတောတောင် ရေမြေ ထိန်းသိမ်းချင်သူ တွေ
တစ်ချို့က တရုတ်တွေ စီးပွါးရေးနယ်ပယ် ချဲ့လာတာ ကို မကြိုက်တဲ့ သူတွေ
တစ်ချို့က ဒီ အစိုးရ ဘာလုပ်လုပ် ကန့်ကွက်မဲ့ သူတွေ
တစ်ချို့ က ဘာမှန်းမသိ အများယောင်လို့ လိုက်ယောင်နေသူတွေ
တစ်ချို့က အိတ်ထဲ ကို ပွဲခ မျိုးမျိုးမြက်မြက် ရခဲ့/ ရနေ/ ရမဲ့ သူတွေ
တစ်ချို့က အဲဒီ ကနေ လုပ်ငန်းနွယ်နေသူတွေ
တစ်ချို့က ဒီ အစိုးရ ဘာလုပ်လုပ် အတင်းထောက်ခံရသူတွေ
ဒီ လူ တွေ ဟာ ဘယ်သူက တစ်၊ ဘယ်သူက လစ် မသိ အောင် ကို လူစုံ လို့ တစ်ထွေးကြီး။
ဒီကြားထဲ မှာ တကယ်ဘဲ နိုင်ငံကောင်းကျိုး / ပြည်သူတွေ အကျိုး အတွက် ဘက်မျှ ချိန်ဆ ကြည့်နေသူတွေ တကယ်ဘဲ ပါရဲ့လား ဆိုတာပြောရခက်သား။
အနောက်တိုင်းသား တွေ က တရုတ် က စက်ရုံတွေ ကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု တွေ ကို လက်ညိုးထိုးလာတော့
အနောက်တိုင်းတို့ ညစ်ညမ်းစေခဲ့လို့ ဒုက္ခ စတော့ မှ အရှေ့ကို လက်ညိုးလာထိုးနေ တယ် လို့ ဝေဖန်သူတွေလဲ မရှား။
ကိုယ့်အကျိုး (နိုင်ငံ အကျိုး) က ပထမ ဦးစားပေးမို့ ကမ္ဘာ မှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် အဲဒါ ကို ကြည့်မနေနိုင်ဘူး ပြောသူတွေလဲ မရှား။
အဲဒီ နှစ်ဖက် အမြင်ကြား ကိုယ့်မှာ ခြံစည်းရိုးပေါ်ခွထိုင်ပြီး ဟိုဘက်ကြည့်လိုက် ဒီဘက်ကြည့်လိုက်။
. နှစ်ဖက်လုံး မှန်သလားဘဲ လို့ တွေးလိုက်။
အခုတော့ ဘယ် ကို အားပေးရမယ် မခွဲနိုင်တော့။
ကွကိုယ်တောင် ဘာလဲ ဆိုတာ မမြင်တတ်တော့။ . ပေါလ် လို ခံစားချက် ရနေပြီထင်ရဲ့။ lol:-)))))